Daraasad cusub oo shaaca ka qaaday waxyeelada cunada dufanka badan – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Daraasad cusub oo shaaca ka qaaday waxyeelada cunada dufanka badan
Cunista dufanka badan, cunada dufanka badan waxay si dhakhso ah saameyn ugu yeelan karaan xididdada dhiigga, daraasad cusub ayaa soo jeedisay.
Cunnooyinka degdegga ah waxaa badanaa loo yaqaannaa cuntada la warshadeeyay, oo leh dalab aad u sareeya oo ah hab wax ku ool ah oo lagu badbaadiyo waqtiga, laakiin maahan habka nafaqada ee ugu fiican, sababtoo ah dufanka iyo suurtagalnimada nafaqada oo hooseysa.
Daraasadu waxay sheegaysaa in burgers, pizzas iyo bolse bolse ay horseedi karaan atherosclerosis, oo ah sababaha ugu weyn ee keena wadne xanuunka iyo istaroogga, waqti yar gudahood oo maamulka ah.
Waxa ku cusub daraasaddan ayaa ah in ay ku dartay saamaynta degdegga ah ee cuntooyinka ay ku jiraan dufanka buuxa, daraasadihii hore ayaa ka hadlay saamaynta muddada dhexe iyo muddada dheer.
Daraasaddan ayaa lagu sameeyay koox jiir ah oo lagu duray dufanka buuxa iyo karbohaydraytyada, waxaana lagu ogaadey in xididdada jiirka ay si dhakhso leh u adag yihiin, taas oo gacan ka geysanaysa isu-ururinta “meeleeyada” waxay horseedi kartaa xinjirowga dhiigga, waxayna xannibisaa bixinta dhiigga ee wadnaha iyo maskaxda.
Kooxda cilmi-baarista waxay ka digaan cawaaqibka ka dhalan kara cunnooyinka cunnada lagu warshadeeyo sida khudradda faransiiska, rootiga cad, cunnooyinka diyaarka ah iyo hilibka soodhada leh, siiriyaalka sonkorta leh, iyo soodhada, maxaa yeelay waxay dardargelin karaan cudurrada wadnaha iyo maskaxda.
Previous articleGabar Soomaaliyeed oo xildhibaan ka noqotay Degmo ka mid ah Maraykanka
Next articleHeshiiska Mareykanka iyo Shiinaha ee ku saabsan joojinta labada dhinac ee waajibaadka canshuuraha